Yakasarudzika logo (Min. Order: 1 Zvimedu)
Yakagadzirirwa kurongedza (Min. Hodha: 1 Zvimedu)
Graphic kugadzirisa (Min. Oda: 1 Zvimedu)
Ruoko Kusona Nhabvu Bhora reMatch
Lead Nguva Yakawanda (Zvimedu) 1 - 2000 2001 - 10000 10001 - 50000> 50000 Est. Nguva (mazuva) 15 20 30 Kutaurirana Quick Details Makwikwi Mukombe wepasi rose FIFA Nzvimbo Yekutanga Guangdong, China Zita rezita Tianda Model Nhamba XLSB039 Material PVC, TPU, PU Chigadzirwa zita reBhora Ruvara Rutsvuku, Girinhi, Jena, Grey, Chena, Dema, Bhuruu Kukura 2/3/4/5 Rudzi rweMatch Kurongedza 1pc / pp Bhegi Bladder Rubber Bladder Surface Shiny Smooth Usage Nhabvu Kudhinda Kudhinda Sil ...
Ruoko Rwakagadzwa Bhora rekudzidziswa
Yakakwira mhando yehunyanzvi vana vanodzidzisa nhabvu midziyo yenzanga
Bhora rakadzika-rakasungwa reSosaiti (nomwe-padivi nhabvu). - Zvimiro ・Yakareruka uye nyore kushandisa dhizaini. ・Kutengesa Kwakanaka Chigadzirwa ・Ruoko rwakasonwa - Chigadzirwa ruzivo Size5 Society Bhora -OEM Yakagamuchirwa Yakasarudzika mumarudzi akasiyana chete mune yakafanana dhizaini. OEM MOQ: 1000pcs-Muenzaniso Samples inowanikwa (kutumira uye sampuli mari inofanirwa kutakurwa nemutengi).
Ruoko-Rwakagadziriswa Thermally Yakasungwa Kugadzikana Yekusimudzira Nhabvu Bhora
- Zvimiro ・Ruoko rwakasonwa ・Japan Nhabvu Association yakasimbiswa
- Chigadzirwa ruzivo Saizi 5 | Saizi 4 bhora renhabvu * Nebhokisi
-OEM Yakagamuchirwa Chete nenzira imwecheteyo yekugadzira pasina kuwana Japan Nhabvu Association yakasimbiswa. Yakasarudzika mumarudzi akasiyana chete mune yakafanana dhizaini. OEM MOQ: 1000pcs
-Muenzaniso Samples inowanikwa (kutumira uye sampuli mari inofanirwa kutakurwa nemutengi).
Ruoko Rwakagadzika Nhabvu bhora yekudzidzira
TPU Mini Saizi 1 # Balloon Diki Nhabvu Bhora Nhema uye Yero Nhabvu Muchina Wakasungwa Nhabvu Bhora Yevana Kudzidzisa Kunze Mitambo
1. Dhirivhari nenguva : Isu tinodzora nguva yekuendesa zvakanyanya kune vatengi.
2. Hunhu system: Zvigadzirwa zvedu zvakapfuura ISO9001, ASTM96, PAHS, REACH, nezvimwe bvunzo.
3. Yakadzika MOQ: Isu tinoisa mari kumafekitori, inosangana nemabhizinesi ese anodikanwa chaizvo.
4. OEM yakagamuchirwa : Tinogona kuita kugadzirwa sekugadzira kwako.
5. Sevhisi yakanaka: Boka redu rebasa rine makore anopfuura makumi maviri ane ruzivo Vanokubata seshamwari.
Nyanzvi Yemhando yepamusoro Ruoko Rwakasonerwa Matai Bhora Bhora
Bhora renhabvu rakagadzirwa pamwe chete neNoritake Kinashi's "SVIRA OUT" basa uye sfida's VAIS. Kubatana pakati pevanhu kunoratidzwa vachishandisa maoko asingaverengeke, vachigamuchira chishuwo chekubatanidza nyika kuburikidza nebhora renhabvu.
Yakakwirira yepamusoro mhando PU Wholesale machisi nhabvu nhabvu / OEM tsika kudhinda nhabvu nhabvu sialkot Pakistan
Yakadhindwa Logo Tsika Yeganda Nhabvu Yemakwikwi
1. Nhabvu saizi: # 2 yemucheche, # 3 yevana, # 4 yevechiri kuyaruka, # 5 yemakwikwi;
2. Inner butyl manera, ekunze PU, PVC, TPU
Yakasarudzika logo (Min. Order: 1000 Zvimedu)
Yakagadzirirwa kurongedza (Min. Hodha: 1000 Zvimedu)
Graphic kugadzirisa (Min. Order. 1000 Zvimedu)